राजपा पदाधिकारी बैठक विशेष – महाधिवेशनमार्फत अध्यक्ष बन्ने दाउमा महतो – नेपाल न्युज डट प्रेस
Home > राजनीति > राजपा पदाधिकारी बैठक विशेष – महाधिवेशनमार्फत अध्यक्ष बन्ने दाउमा महतो
राजपा पदाधिकारी बैठक विशेष – महाधिवेशनमार्फत अध्यक्ष बन्ने दाउमा महतो
काठमाडौं। विभिन्न ६ वटा राजनीतिक दल मिलेर गठन भएको राजपाभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ। यसअघि राजपाले बैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर समयाभावका कारण भन्दै तोकिएको समयमा महाधिवेशन नभएपछि पार्टीभित्र महाधिवेशनका विषयमा विवाद देखिएको हो। आइतबारदेखि राजधानीमा जारी पदाधिकारीको बैठक महाधिवेशनका विषयमा केन्द्रित छ।
सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले विभिन्न पाँच वटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए।
संयोजक भण्डारीले महाधिवेशनको विषयमा दुई वटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। उनले एकता महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विकल्प प्रस्तुत गरेको एक नेताले जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार संयोजक भण्डारीले पहिला एकता महाविधेशन गर्ने र त्यसपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
यी दुवै प्रस्तावमा नेता महन्थ ठाकुरले सहमति जनाएका थिए। उनले जुन विकल्पमा गएपनि महाधिवेशन हुनुपर्ने बताएका थिए। तर अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले भने तत्काल महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै पहिला विधान बनाउनुपर्ने र विधानलाई कार्यकर्ताबीच लिएर जानुपर्ने बताएका थिए।
६ वटा राजनीतिक दल मिलेर गठन भएको राजपाभित्र सर्वस्वीकार्य नेताका रुपमा महन्थ ठाकुर हुन्। ठाकुरको नेतृत्व स्वीकार गर्न सबै तयारै छन्। तर ठाकुर उमेर र स्वास्थका कारणले सक्रिय राजनीति गर्न नसक्ने भन्दै नेता राजेन्द्र महतो महाधिवेशनपछि आफू अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन्। स्रोतका अनुसार राजेन्द्र महतो तत्काल विशेष महाविधेशन गरेर भएपनि आफू नेतृत्वमा आउन चाहन्छन्।
त्यसकालागि उनले ८१५ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य र तीनवटै निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएकालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि मानेर विशेष महाधिवेशन गराउनुपर्ने बताएका छन्। ‘यहाँमा नेतृत्वमा पुग्ने तीव्र चाहना छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसकालागि उहाँले विशेष महाधिवेशन गराउनुपर्ने कुरा निकाल्नु भएको छ।
चक्रीय प्रणालीमा संचालन भएको राजपामा गत मंसिर ५ गते संयोजकको जिम्मेवारी राजेन्द्र महतोले पाएका थिए। दुई दुई महिनामा नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रावधान अनुसार राजेन्द्र महतोपछि महेन्द्र राय यादव संयोजक भए भने अहिले शरतसिंह भण्डारी राजपा संयोजक छन्। महन्थ ठाकुरले यसअघि नै लामो समयसम्म संयोजकको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन्। भण्डारीको कार्यकाल जेठ पाँच गतेसम्म रहेको छ।
भण्डारी आफ्नो कार्यकालमा महाधिवेशन होस भन्ने चाहन्छन्। त्यही भएर उनले सोमबार बसेको पदाधिकारीको बैठकमा महाधिवेशनका विषयमा दुई वटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। तर उनका दुई वटै प्रस्ताव पारित हुने संभावना कम रहेको स्रोतले जनाएको छ। ‘यहाँले कुनै लोभ लालच भएका कारण नभइ पार्टीलाई गतिशिल बनाउन महाधिवेश गर्नुपर्छ भनेर महाधिवेशन विषयमा दुई वटा विकल्प दिनु भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुई वटै विकल्पमा सहमति भएन भने पनि उहाँले महाधिवेशन गराउन पहल गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन।’
अहिले नै विशेष महाविधेश वा एकता महाधिवेशन भयो भने अध्यक्ष मण्डलका बाँकी दुई सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल झा संयोजक हुनबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यही भएर उनीहरु दुवै जना अहिले महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छैनन्। यदि यादव र झालाई पनि संयोजक बनाउने हो भने असोजसम्म उनीहरुको कार्यकाल हुनेछ। त्यसो भयो भने मंसिर अगाडि राजपाको महाधिवेशन हुने संभावना न्युन हुन्छ।
माडीका १२ वटा पुल निर्माण कार्य सुरु
बालिका निर्मला पन्तको सामुहिक बलात्कार पछी हत्या गरेको आशंकामा ४ व्यक्ति पक्राउ
महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा जोड दिनु आवश्यक-महिला तथा सामाजिक समिति
मनसा सिमेन्ट उद्योगका व्यवस्थापक भारतीय नागरिक कमलसिंह दुगडको हत्या
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा गौतम बुद्ध विमानस्थल निरीक्षण
समाजिक परिवर्तनका परिवर्तक गोरे बहादुर खपाङ्गी नै हुन् .
बिषयगत समिति सभापतिमा क-कसको उम्मेदवारी पर्दैछ ? हेर्नुहोस पुरा विवरण
भारतमा लोकसभाको दोस्रो चरणको मतदान सुरु
केही व्यक्ति सडकमा मागेर हिँडेको देखे फोन गर्नुस – प्रधानमन्त्री ओली
अझै रोकिएन टिपरको ज्यादती,ब्याक गरेरै मारे मोटरसाइकल चालक
मगरहरुको प्रमुख राष्ट्रिय सास्कृतिक चाड”माघेसकराती” २ दिन टुंडिखेलमा मनाइने